DNA Boqorkii Belgiumka ku qasbay inuu qirto sheeko uu 51 sano qarinayay. - NorSom News
DNA Boqorkii Belgiumka ku qasbay inuu qirto sheeko uu 51 sano qarinayay.
Boqorkii hore ee Belgiumka iyo gabadha uu inkirsanaa inuu dhalay.
Previous articlePST-da oo haweeneydii Frp xukuumada ka bixisay xabsiga u wareejiyay.
Next articleShirkad kaluumeysi Norwiiji ah oo lagu xukumay faquuq iyo magdhow ka dhan ah shaqaale ajnabi ah.